Ongeveer 78% yevatungamiri funga kuti zvirimo ichiri ramangwana rekushambadzira uye kuti brark ndimambo. Hazvifanire kushamisika.
2 Mazano ekutaura nyaya
2.1 Batsiro # 1: Kuwedzera Kubatanidzwa
2.2 Batsirwa # 2. Mira kunze kweboka revanhu
2.3 Batsirwa # 3. Vanhu Vachayeuka Zvinyorwa Zvako
2.4 Batsirwa # 4. Vaverengi Vachatendeukira kuvaFans
3.1 Rustelose chip
3.2 Musha uye Bindu Mufaro
4 Zvigariro zvekuwedzera kuudza nhau muBlog Blog yako
5 Kutaura Nhau uye bemarking op sosiale media
6 Izwi Rako
Paunomira uye uchifunga nezvenhau, ek is nokukurumidza unoziva kuti vanoomerera nesu kwenguva yakareba kudarika chokwadi chinokosha.
Funga nezve firimu rako raunofarira. Ndedzipi nhoroondo dzeiyo bhaisikopo? Zvino, funga nezvekupedzisira nhamba yawakaverenga. Ndeupi ane ushingi muziso repfungwa dzako? Iyi ingangoita nyaya yacho, nekuti pfungwa dzako dzinongo chengeta iro ruzivo zviri nani.
Kugovera mabhuku zvirokwazvo ndiyo yakanakisa yekuita nhau, nokuti unogona kushandisa mavara, mifananidzo, uye kunyange video kuti jouane nyaya yako.
Lou Hoffman, uitvoerende hoof van weHoffman Agency, is ‘n blog in iotarisa pamashoko ekutaura. Anoti iwe unofanira kufunga kunze kwebhuku rekunyora nyaya kana zvasvika kune mabhizimusi mabhizimusi.
Lou Hoffman anopawo zano pa microblog yake Nhoroondo-Techniques.com, kuti mabloggi atarise nezvekusimba, mutambo, uye izwi, pakati pemamwe mazano. Anowanzodaidza kudzidzisa vatema nyowani mune zvebhizimusi kutaurirana, zvichireva kuti icho chakakosha mune chero bhizimusi bhurogi kuedza. Hoffman anosimbisa kuti nepo nzira dzekutaura nyaya dzichikosha mukubloga, haisiyo yetsika nyaya yawakakura nayo. Panzvimbo iyoyo, tarisa nekuwedzera zvikamu zvengano, sekudhara hunhu hukama, kana kumwe kukakavara kukurira.
Mazano ekutaura nyaya
Nancy A. Shenker inopa muHuffington Post uye inoshandisa blog Musikana Akaipa, Bhizimisi Rakanaka.
Nancy anotsigira izvo zvimwe zvidzidzo zvaratidza. "Sezvo kutarisa kwevanhu kunotarisana nekuderera (pasi kusvika kuA8 sekondes), zvinyorwa zvepaIndaneti (uye nevanyori varo) zvinofanira kushanda zvakaoma kutora muverengi."
Vanhu ndaneta nekuona voorraadkuns. Kunyanya kuveko kwega grafiese, virtuele. Izvo zvakare zvakanaka kuenderana nechimwe chinhu chomunhu uye chinonakidza, asi pakupedzisira chinoita kuti grasuie chakakodzera kune muverengi. Kunze kwekunge iwe uine juzi kana sordid memoir, kana uri mukurumbira, hapana munhu anonyatsoda kunzwa nezve hupenyu hwako kunze kwekuenderana nehupenyu hwevaverengi, zvakare.
Batsiro # 1: Kuwedzera Kubatanidzwa
Ruit zvakawanda zvakabatsiro zvekubatanidza nyaya yekunyora mubhogi rako. Zvichida rubatsiro rwakanyatsojeka kuri kuwedzera kubatanidzwa nevashanyi venzvimbo. Alex Turnbull akanyora nyaya yekudzidza pamusoro pokuti sei kutaurirana nyaya kwakawedzera Groove se blog yekudyidzana ne300%.
Turnbull anorayira kuvhara zvinyorwa zvako munyaya huru. Anofananidza zvakagadzirwa nemishonga uye nenyaya yekunyora kumasipi uye anotiudza kuti tivhare mishonga mumasipi kuitira kuti inakidze.
Groove akasarudza kuita kumwe kupatsanurwa kuedza. Vakamhanya mapeji maviri epositi. Rimwe risina nyaya uye rimwe. Icho chinyorwa chaisanganisira nyaya yacho chaiva ne300% vamwe vashanyi vakatsvaira kusvika pasi pepositi, zvichienderana neye asina nyaya yacho. Pamusoro peiyo, muvhareji nguva iyo vashanyi vakashandisa pamusangano uye nyaya yacho yakapetwa kashanu ruit yakasimwa kunze.
Batsirwa # 2. Mira kunze kweboka revanhu
Kubva panguva iyo vanhu vakatanga kuungana vachipoterera gomba remoto uye vakagovana nyaya dzekuvhima kwezuva, murume ave anoda tamba yakanaka. Muchokwadi, pfungwa dzedu dzakanyatsokodzera kupindura kutaurwa.
Kushandisa madimikira kune zvazvinoita pauropi yemuverengi. Emune-universiteit in 2012, Yekudzidza, masayendisiti akawana kuti kana zvirevo zvekongiri zvaisanganisira kuumbwa zvakamisa en sensoriese korteks.
Batsirwa # 3. Vanhu Vachayeuka Zvinyorwa Zvako
Batsirwa # 4. Vaverengi Vachatendeukira kuvaFans
Haisi imwe yechinangwa chikuru cheblog chero ripi rekushandura vashanyi vesaiti kuti vave vateveri? Kunyangwe weee unganidza mazita uye maemail kune erutsamba runyorwa, kana ivo vanongodzokorora blog yako zvakare uye nekudzokorora, kushandura vashanyi kuve vateveri kunobatsira bhurogi rako kukura nekufamba kwenguva.
Veteraan-blogger Neil Patel anogovera yake purogiramu yekudhinda kukura blog yake uye kurova vaverengi ve100,000. Anoratidza kuti akazviita sei nekugoverana nerwendo rwake nekuita kugadzikana mupfungwa nevadzidzi vake kuburikidza nekunyora nyaya.
Kwemakore apa WHSR, ndakabvunzurudza akati wandei eema blogger akasiyana. Chinhu chimwe chete chandakaona nezvevanonyatsoblogga mabloggi ndechekuti vanoshandisa kutaura nyaya dzimwe nguva. Heano mamwe eanonakidza blog blog Zvandauya nazvo zvinosanganisira kutaura nyaya:
Mufananidzo: rustelose chip
Marye Audet-White, u blog blog Restless Chipotle inotsanangurira huwandu hwemagariro evanhu sechimwe chinhu chakanakisisa chaanoita icho chinotungamirira motokari kune bhagi hark. Iyo blog inopa mapeji akasiyana-siyana, ayo angaita seakanaka akachekwa uye akaomeswa pamusoro, asi Marye anowanzozviisa pachepa yake.
Somuenzaniso, anonyora nezve butterscotch hawermoutkoekies, sharign iyo ruzivo rwakanga rwakafuridzirwa nekapepa rakanyorwa nemai amai vake vakasiya. Izvozvi zvakafanana nekiki imwechete yaidya mwana. Anosangana pamwoyo, nokuti isu tine tine chiyeuchidzo chekudya kubva paudiki hwedu. Iye anobva apinda mune tsanangudzo pamusoro pekuita makiki. Muverengi atove akabatwa.
Musha uye Bindu Mufaro
Mumwe muenzaniso wekunyora nyaya pa blog yake unogona kuwanikwa mumutambo Dongo re Container Vegetable Gardens. Anotanga nokutaura nezvehurukuro yachangobva kupa uye kuti achapindura sei dzimwe nguva mibvunzo yaanowana paanenge achinyora pamusoro pevhu. Izvi zvinokwevera muverengi kumucheto nekuita kuti aenzane nevakasangana semusangano.
Skermafdruk van uProblogger-plasing.
ProBlogger inowanikwa naDarren Rouse, asi inopa zvinyorwa kubva kune ma blogger akasiyana-siyana. Chimwe chezvinhu zvose zvinyorwa izvi zvakafanana mune imwe nzira yekutaura nyaya.
Jim Stewart, nyanzvi yeSEO, anonyora nezvekushandura nzvimbo uye nekubatana kwe SEO paProBlogger. Anotanga mutsara nemashoko pamusoro pomutengesi weAustralië uye zvino anobatanidza nyaya iyo kukurumidza uye nei ichikosha.
Ehe, ini handigoni kusiya edu anoshamisa mabloggi pano ku WHSR. Vanyori vedu vanowanzo shandisa kutaura nyaya kuendesa vaverengi. Isu tinotsvaga izvo zvakasarudzika zviwanikwa, vanobvunzurudza nyanzvi, uye taura nyaya kuratidza chitsidzo kana kupa muenzaniso. Imwe chinyorwa chinobatanidza zvese izvi zvinhu ndeye yedu veteraan munyori Luana Spinetti.
Muchikamu chake 7 Nhau dzekutsanangura nyaya dzekutsvaga Blog yako Readership, Luana anotanga nokutaura pamusoro penyaya yake pachake ne niche blogging.
Zvigariro zvekuwedzera kuudza nhau muBlog Blog yako
Zvisinei, ek is unogona nyore nyore kuwedzera nhaurirano munyaya iyi nenzira shomanana dzakasiyana:
Taura nyaya yako pachako nezvenguva yausina kuchengetedza mapepa ako akarongeka, akaongororwa, uye zvichidhura het $ 2500,00.
Taura nyaya yomunhu waunoziva uyo aifanira kunge akachengetedza mapepa emitero.
Taura nyaya kubva pakuona kwemuverengi. Heuno muenzaniso: “Munopokana gore rega rega kuti muuye nemapepa kuzopedzisa mutero? Inguva ingani iwe yaunotambisa kudhonza makorokodzwa akafuma kubva pasi pe desiki rako dhizaini? Ko kana uchigona kuchengetedza nguva nemari mukuita mutero uchingove uri kugadzira faira rakarongeka? “
Gadzira nyaya inhema. Kana iwe usina nyaya, uye ukasawana imwe, zvakanaka kuita mamiriro. Ini ndakangoita izvo pamusoro apo ini ndakaita iyo bespot post pamusoro pemitero.
Kutaura Nhau uye bemarking op sosiale media
Ziva platform vir sosiale media
Kutanga, iwe unofanirwa kunzwisisa chikamu chako chauri kutumira, kuitira kuti ugone kuchinja nyaya yacho pachikuva. Nhau pa Twitter yakawanda shomanana nemasikirwo ruit nhau paGoogle +. Nhau pa Instagram ichava yakanyanya kuisa pfungwa pakuudza nyaya nemifananidzo, nepo nyaya iri pa Facebook ichasvika kumifananidzo nekunyora.
Mashoko nemavhidhiyo kana mifananidzo zvinowanzova nekutaura kukuru kubva kuvateveri. Taurira nyaya yako nevhidhiyo pfupi uye chikwata kune mamwe mashoko pawebsite yako. Kunyange zvazvo vamwe vanhu vasingatori nguva yekuverenga zvinyorwa, vachaona vhidhiyo inotsigira ruzivo. Zvinhu zvakadai saPlay Live zvinokubvumira kuti uende munguva chaiyo uye uiteet vateereri vako.
Bron: Design Design Wizard.
Zvakanakisa kuita kuti nyaya ipfupi uye kusvika pacho, kana kungokurudzira kukurudzira kuti jouane rumwe ruzivo. Sezvo aya mapuratifomu anoonekwa nemasikirwo, vateereri vangangodaro vasingatenderi mavara akareba mavara.
Imwe pfungwa inokubatsira iwe kutaurira nyaya ruit zvekugarisana nevamwe ndeyekugadzira mutsara wemifananidzo uye zvinyorwa zvese zvakabatana neshoko rimwechete.
Somuenzaniso, kana iwe ukanyora nhaurwa pamusoro pekuvandudza gwara rako regorofu, iwe unogona kuumba mifananidzo yemapikicha ane mazano mashoma sezvinyorwa zvinotora muverengi kubva pakusarudza kambani yakaruramaekuta.
Sarudza nhau hashtag uye tanga nhaurirano yepa Twitter pachirongwa chemashoko ako. Iwe unogona kutanga nekugovana chibatanidza kune chinyorwa uye wozokurudzira vateveri kubvunza mibvunzo kana kutanga hurukuro pamusoro pehurukuro.